Home Slider - PyinNyar
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် မတ်လ(၃)ရက်နေ့ စဖွင့်မည်။
Let us Help တာဝန်ယူပါရစေ
What ever you are we will be train the best situation for you.
ညံ့ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ် …..
Don’t be Worry or Busy for your child, We will take care of them .
လူမှု့စီးပွားအရေးများနဲ့ သားသမီး ပညာရေး အချိန်ပေးဖို့
ဆရာဦးမြင့်ကျော် (ရမ္မာဝတီ) ဦးစီးသော
ပညာမော်ကွန်း – ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ
လူကြီးမင်းတို့ ကိုယ်စား တာဝန်ယူပါရစေ…
Pyinnyarmawgune is License Private High School. We pay attention to every students with skillful teachers. Although We started on 2016, we have strong teaching systems, including Guiding, Message Book, tutorial test and monthly test.
ပညာမော်ကွန်းကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဧ။် ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်အမှတ် ကကယ/၁၃/၄၃/ဝ၇၄ ရရှိထားသော ကျောင်းကြီးဖြစ်ပါသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကြီး ဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရကျောင်းများကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်စီမံခွင့် ရရှိပါသည်။
စာစစ်အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများကိုယ်တိုင် စာမေးပွဲများ စစ်ဆေးလေ့ကျင့်ပေး၍ အောင်မြင်သော ရလာဒ်ကောင်းများ ရရှိစေပါမည်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တစ်ဦးချင်းစီအား ဂရုတစိုက်လေ့ကျင့်ကျက်မှတ်ပေးခြင်း၊ တစ်ခန်းသင်ကြားပြီးတိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများကို အကြိမ်ကြိမ် ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတို့ကြောင့် တစ်ခြား ကျူရှင်များ၊ ဂိုက်များ ထပ်မံ သင်ကြားရန် မလိုအပ်ပါ။
ပညာမော်ကွန်း ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကြီးသည် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ထူးချွန်ထက်မြက်ရေးကို အဓိက ပင်မ ပန်းတိုင်းအဖြစ် လက်ကိုင်ထားသောကြောင်း ကျောင်းတက်မှန်မှု၊ ဆရာ၊ ဆရာမများဧ။် လမ်းညွှန်ပြသပေးမှုများကို တိတိကျကျလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းဝင်ခွင့်ပုံစံ၌ ပါရှိသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို လုံးဝ လိုက်နာရပါမည်။
မိမိတို့၏ သား၊ သမီးများကို ထူးချွန်ထက်မြက်စေလိုသော မိဘများနှင့် ဘဝရည်မှန်းချက်မြင့်မားစေလိုသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားသော ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ မှာ ကျောင်းတော်ကြီးကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့တယ်..။
စနစ်ကို အုတ်မြစ်ချ၊ စည်းကမ်း၊ ပညာ ပေါင်းစပ်ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာမို့ ဒီလို××ဒီလို ပြင်ဆင်ထားတယ်။
စာသင်/စစ် အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာကြီး/မကြီး များဧ။် ပြည့်ဝ ထိရောက်သော သင်ကြားမှု့အစီအစဉ်
သင်ပြီးသမျှ စစ်မေးမည့် Guiding အစီအစဉ်
သင်ကြား/သင်ယူမှု့ မှတ်တမ်းဖြင့် မိဘထံ ဆက်သွယ်နေမည့် message book အစီအစဉ်
အပတ်စဉ် နားလည်မှုစစ်ဆေးခြင်း (tutorial test)
တက်မြောက်မှု့စစ်ဆေးခြင်း (monthly test) စသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ရလဒ်များအား (ဆရာ၊ မိဘ၊ ကျောင်း) ဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဉ်
နယ်မှ ကျောင်းသား/သူများအတွက် မိဘနှင့်မခြား ရင်နင့်သားကဲ့သို့ စီမံထားသည့် မိသားစု ပုံစံ ဘော်ဒါစနစ်
နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ လေ့လာပါ၊ သာတယ်ထင်မှ အပ်နှံပါ။
Call Us – 09-796833124, 09-691182296, 09-752487872
အမှတ် (၄၅/၄၆) ငွေလရောင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါပြီ။ အမှတ် (၄၅/၄၆)၊ ငွေလရောင်လမ်း၊ ဆရာစံတောင် (စံပြ) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ 09 5087875, 09 443748277, 09 796833124, 09 421006860
ပညာမော်ကွန်း ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း၏ အစဉ်အလာ ဖြစ်သော စည်းကမ်း ပညာကိုယုံကြည်မှသာလာရောက်အပ်နှံပါ။ Facebook Video
ပညာမော်ကွန်းကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်း ၏ နှစ်ဆန်းတစ်ရက် နှစ်ဦးအလှူ
ပညာမော်ကွန်းကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်း ၏ နှစ်ဆန်းတစ်ရက် နှစ်ဦးအလှူပါ မကောင်းမှူရှောင် ကောင်းမှူ ဆောင် ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားနိုင်တဲ့ ကြပါစေ
ပညာမော်ကနွ်း – ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း သည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခငွ့်ပြုချက် လိုင်စင်အမှတ် ကကယ / ၁၃ / ၄၃ / ဝ၇၄ ခငွ့်ပြုချက် ရရှိထားသော ကျောင်းကြီးဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တရားဝင် ခငွ့်ပြုချက် ရရှိသော ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကြီး ဖြစ် သောကြောင့် အစိုးရ ...
အမှတ် (၄၅/၄၆)၊ ငွေလရောင်လမ်း၊ ဆရာစံတောင် (စံပြ) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ph : 09-5087875, 09-796833124, 09-691182296, 09-752487872